DIDY VAOVAO – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 4, 2016 novembre 3, 2016 Laisser un commentaire sur DIDY VAOVAO
« Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, dia ny lalàn’ny fahafahana, ka maharitra amin’izany raha tsy mpihaino manadino, fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin’ny asany izany olona izany. » Jakoba 1:25
– Natao ho fanomanana ny Testamenta Vaovao ny Testamenta Taloha. Jesosy no fahatanterahan’ny lalàna. Ny Testamenta Taloha no nanomezan’Andriamanitra ny Didy folo tamin’ny alalan’i Mosesy. Milaza ny tokony hataon’ny olona amin’Andriamanitra sy amin’ny olona ny Didy folo. Nosoratana tamin’ny vato fisaka ireo. Kanefa hoy Paoly: « ny soratra mahafaty, fa ny Fanahy no mahavelona » II Kor 3:6. Tsy manankery hamonjy antsika ny lalàna fa ny Fanahy no mahavonjy. Tokony hitodika amin’i Jehovah ny olony rehefa tsy nahatanteraka ny lalàna.
– Ny Lalàna tanteraka voalaza eto, na ny lalàn’ny fahafahana dia ny didim-pitiavana hoe « Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao » sy ny hoe « Tiava ny namanao ». Didy nefa didim-pitiavana, ary fantatsika fa fehin’ny fahatanterahana ny Fitiavana. Azo ambara koa hoe didy vaovao. Ho fehin’izany ary dia: « Minoa an’i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. »
Publié parfilazantsaramada novembre 4, 2016 novembre 3, 2016 Publié dansUncategorized